Rock House - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDenise
Indlu yanamhlanje eyilwe ngokwezakhiwo kwi-Wild Atlantic Way, ejongene nendawo yokugcina iintaka zasendle kunye nentaka ephakamileyo yokufihla ezantsi kwegadi; ibhayinotyhulayi kunye neencwadi zeentaka kwithala leencwadi. Indlu yindlela emfutshane yokuqhuba ukuya eMalinhead enezibane zayo zaseMantla kunye nendawo yayo yeeMfazwe zeNkwenkwezi kwaye kodwa ziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka eMalin Village. Iibhayisekile ezimbini zinikezelwe, zikhwelwa ngomngcipheko weendwendwe kwaye iFingers Fingers Strand entle ngumjikelo omfutshane okanye uhambe. Ihottub iyafumaneka nakwiindwendwe.
Kukho indlu yegadi enetafile ye-ping pong ukuze isetyenziswe ziindwendwe, indawo yokufihla iintaka kwiwotshi yeentaka kwaye kukho i-hottub ekhoyo egadini enokubhuka kwangaphambili, esetyenziswa ziindwendwe ezizibeka emngciphekweni wazo. I-hottub isemoyeni ovulekileyo phezulu ecaleni kwendlu enkulu, ihlolwe ngamatyholo kodwa inombono wolwandle. Akukho ntlawulo yongezelelekileyo nge-hottubhu kodwa imigaqo yile: (1) kungabikho banxili bomgunyathi ebhafini njengoko itshabalalisa izihluzo kunye (2) neefluti zeplastiki kunye neeglasi ezilungiselelwe iziselo. Akukho glasi nceda. Iitawuli ezongezelelweyo, iiflipflops kunye neengubo zinikezelwe. Ifoto yendawo ibeka indawo yebhafu eshushu phezu kwenduli ecaleni kwendlu enkulu.
Sisendleleni eya eMalinhead, eyona ndawo isemantla eIreland apho iStar Wars yadutyulwa khona nalapho kubonwa khona izibane zaseMntla. Sijonge iTrawbreaga Bay, ngaphaya ukuya kwiSiqithi saseDoagh kunye nohambo olufutshane ukusuka kwiLali yeNdlala yaseDoagh kunye neSiqithi saseLapland Doagh kunye nebala legalufa laseBallyliffen.
Ndiza kubakho xa kufuneka kwaye iimephu zasekhaya eziluncedo kunye nolwazi luyafumaneka kwi-Rock House.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Goorey Rocks